Chad's Videos DAT Review - CourseSaver - CRUSH The DAT current_year
Sidee inaad wax ka barato la Chad ee Videos?
Course Saver Code Coupon iyo dhimista
Chad's Videos - CourseSaver DAT Review burburka
Best CourseSaver Discounts & Xeerarka Promo
Chad ayaa Videos, sidoo kale loo yaqaan CourseSaver, waa kooras ku oolli-DAT dib u eegis loogu talagalay ardayda pre-ilkaha. macallimiinta, Chad iyo Alan, ayaa isticmaalaya koorsooyinka dib u eegis video ay u baraan ardayda caafimaadka pre-muddo ka badan 12 sano. socdeyba Tani iyo waayo-aragnimo dhab ahaantii iyaga gooni u dhigaya tartamayaasha.
Si fudud u gelin, Socodkoodu waa mid ka mid ah qalabka baridda ugu wanaagsan ee suuqa maanta. Way adag tahay in wax xun in la yidhaahdo oo ku saabsan ka heli CourseSaver – waxay leeyihiin si fiican u maleeyay-baxay oo dabcan dib u eegis dhamaystiran oo kaa caawin doona ardayga pre-ilkaha wax kordhin dhibcaha ay ku Baaritaanka Admission Ilkaha.
CourseSaver bixisaa Dabcan dib u eegis ay ku jiraan maktabadda video yaqaan a a Chad ayaa Videos, qeexaysaa for qayb kasta oo yaryar. In kastoo aan il dhamaystiran dib u eegis, waxa aanu dabooli qaybaha muhiimka ah ee ay u dhan iyo kuwa kale oo qayb ahaan. Haddaba waan tegi doonaa iyada oo loo marayo imtixaan kasta oo u sharax waxa daboolay by Chad ee Videos.
Chad’s Videos is an instructional video library where the namesake expert teaches the material for the DAT to a pre-health students. Waxaa cad oo qeexan maktabadda video ah ka dhigaya barashada waxyaabaha fudud – aad dareento sida aad ku jirtid fasalka.
Videos laguu ogolaado in aad si aad u maqasho Chad sharaxo fikradaha ah oo dherer ah – waayo, kuwo badan, this waxaa quman in akhrinta buugaagta iyo barashada oo aan ku hanuunin. videos waxaa lagu ciyaari karaa labada xawaare kala duwan, dhakhso ah ama caadi ah, kaas oo u ogolaanaya daawadayaasha in ay dufanka wax ama waqti badan ku qaataan barashada fikradaha ah.
CourseSaver sidoo kale bixisaa 40+ videos DAT lacag la'aan ah iyo boqolaal ka mid ah free videos kale si aad ku eegaan karo wax ka iyo ballaariyo ballaadhkiisuna ee waxbarashada. Waxaan kula talin lahaa hubinta baxay videos free hor iyaga iibsiga si ay u arkaan haddii ay wax inaad ka faaiidaysanayso.
Chad ayaa Videos, ay la socdaan dulmari dheeraad ah oo yaryar, siiyaan wax u eegis weyn u DAT ah. Qaybaha General Chemistry iyo Organic Chemistry waa standouts ee Chad ayaa Videos, iyo, fikradeyda, waa ilaha dib u eegis ugu fiican ee suuqa. The Biology iyo kale saddex baaritaano ah DAT ku leeyihiin qaar ka mid ah wax si ay u eegaan, laakiinse iyagu ma complete ama sida wanaagsan sida ilo dib u eegis sida labada qaybood Chemistry.
Aan u gudbo wax in Course Saver waxay bixisaa iyo u aragto haddii ay ku caawin karaan.
dulmari: Overviews of cashar kasta laga heli karaa inaad kala soo baxdo. Dib u dulmari ee cashar kasta si aad u ogaato waxa looga hadli doono. Waxaad qaadataa qoraalo ku saabsan waxayna u isticmaalaan inay dib u eegaan waxyaabaha ka dib markii uu soo dhameystay qayb kasta.
Videos: videos ee qaybtan ma aha dhameystiran, laakiin waxa ay diyaar u ah oo lacag la'aan ah. Waxay noqon kartaa mid waxtar leh, laakiin waxaan ku talin lahaa in la isticmaalayo ilaha kala duwan sida Kaplan si ay kuu siiyaan dib u eegis dhamaystiran of Biology.
Alan ee Notes: Kuwani waa shuruudaha Biology muhiimka ah iyo qeexidda in Alan ayaa soo wada saaray. Waxa jira erayo wanaagsan in la ogaado, waayo, qaybtan iyo waxay noqon kartaa mid waxtar leh in ay leeyihiin, halka waxbarashada.
yaryar: Waxaa ku jira in ka badan 400 su'aalo la heli karo si ay u tijaabiso aqoontaada.
Qaybtani waxay, oo ay la socoto qaybta Organic Chemistry, waa sababta ugu weyn waa in aad la Chad ee Videos baran. Haddii chemistry ma aha sandal ka dibna laga yaabaa inaad la kulmi doonaan badan oo daqiiqado 'ah-ha' halka Chad eegaya wax aan weligood aad si buuxda u fahamsan yahay ka hor inta, laakiin hadda in Chad mahad. Waxa uu leeyahay qaab loogu sharaxayay fikradaha si in waa mid fudud oo ka dhigaysa fikradaha ugu wareerka badan oo ay adag tahay fudud si ay u fahmaan.
dulmari: Dulmari of cashar kasta laga heli karaa inaad kala soo baxdo. kuwaas oo Dib waayo cashar kasta si aad u ogaato waxa looga hadli doono. Waxaad qaadataa qoraalo on dulmari, oo waxay u isticmaalaan inay dib u eegaan waxyaabaha ka dib markii uu soo dhameystay qayb kasta.
Videos: videos ee qaybtan waa laga cabsado. Waxaa xusid mudan dinaar kasta si ay u isticmaalaan videos, kuwaas oo aad u diyaarinta General Chemistry. Haddii aad u dhaliyay dhibcaha dhow kaamil ah oo ku saabsan imtixaanada barbarashada aad, Waxaan rumaysanahay in aad ka heli doontaa videos si ahaan cajiib ah oo qiimo leh.
yaryar: Waxaa ku jira in ka badan 300 su'aalo si ay u tijaabiso aqoontaada.
Qaybtan waxaa qaybta xulkooda kale ee Chad ayaa Videos. Fikradeyda, waa isha ugu wanaagsan ee Organic Chemistry dib u eegis suuqa maanta.
dulmari: Overviews of cashar kasta laga heli karaa inaad kala soo baxdo. kuwaas oo Dib waayo cashar kasta si aad u ogaato waxa looga hadli doono. Waxaad qaadataa qoraalo on dulmari, oo waxay u isticmaalaan inay dib u eegaan waxyaabaha ka dib markii uu soo dhameystay qayb kasta.
Kooban Xasaasiyada: Waxa ku jira warbixin kooban oo dareen diidmo oo dhan waa inaad ogaataa, waayo, qaybtan.
Videos: videos ee qaybtan waa laga cabsado. Waxaa xusid mudan dinaar kasta si ay u isticmaalaan videos, kuwaas oo aad u diyaarinta Chemistry Organic. Haddii aad u dhaliyay dhibcaha dhow kaamil ah oo ku saabsan imtixaanada barbarashada aad, Waxaan aaminsanahay in aad wax ka heli kartaa baxay videos iyo waxay kaa caawin doontaa in aad dhibcaha si loo hagaajiyo.
yaryar: Waxaa ku jira in ka badan 200 su'aalo si ay u tijaabiso aqoontaada.
Qaybta kaliya ee PAT la daboolay by CourseSaver waa Takoorka Malaggii (ciidmada xagal) subtest, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira nasasho su'aalo la heli karo in ay ku dhaqmaan subtest this. Waxaan si xaqiiqo ah u isticmaali lahaa ilaha kale sida Kaplan ama Crack DAT PAT ka hartay oo ka mid ah hoosaadyo imtixaanka this.
yaryar: In ka badan 1,100 su'aalo la heli karo si aad u iibsato oo tijaabi aqoontaada.
Waxaa jira hal muunad dhamaystirnayn imtixaanka this sida hadda. Isku day eegaya Kaplan ama khayraadka kale si ay u helaan tababar ku saabsan imtixaanka this.
The yaryar oo loogu talogalay baaritaankaan dabooli badan oo wax ku saabsan imtixaanka, si kastaba ha ahaatee, ma wax kasta oo. Waxaa aasaas wanaagsan, laakiin ilo dib u eegis dheeraad ah waxaa lagula talinayaa.
Kuwani waxbaridda videos dabooli macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan badidood iyo ku siiyaan qaar ka mid ah tusaalooyin si aad u aragto sida ay u duugoobi ilaa ilig. Waxay noqon kartaa faa'iido caawinta aad si ay u bilaabaan soo koraya, kuwaas oo xirfadaha ee dugsiga ilkaha, laakiin waxaan u malayn maayo this waxaa lagama maarmaan ah in ay ku dhaqma hore. Waxay kuu siin karaan qarkiisa ka dhan ah fasalka aad, laakiin ma dareemaan cadaadis in ay ku dhaqmaan badidood hor inta aanad bilaabin dugsiga ilkaha.
Review NBDE Koorsooyinka
CourseSaver ayaa yaryar labada Part NBDE ah 1 iyo NBDE Part 2 Imtixaanada Board. Waxaa jira ku dhawaad 6,000 su'aalo for Part NBDE ah 1 Imtixaanka oo si qallafsan 1,000 su'aalo for Part NBDE ah 2 Imtixaanka. Kuwani waxay noqon karaan waxtar leh oo ku siin doonaa qaar ka mid ah dhaqanka dheeraad ah halka diyaarinaya loox.
College Review Koorsooyinka
Course Saver sidoo kale bixisaa koorsooyinka dib u eegis la dulmari, videos, oo yaryar ee soo socda: Chemistry Guud, Chemistry organic, Physics iyo Kiimikada noole. Kuwani waxay noqon karaan mid wax tar leh qof kasta oo si isku dayaya in ay ka heli by, kuwaas oo koorsooyin la fasalada fiican ee ugu macquulsan. Joogtaynta labada a GPA guud sare iyo sare Science GPA waa muhiim u ah is aqbalo dugsiga ilkaha. Haddii aad la dhibtoonayo mid ka mid ah koorsooyinkan ee xirfadiisa undergraduate, ka dibna ay tixgeliyaan in koorsooyinka dib u eegis, kuwaas oo kaa caawinaya in aad kasban fasalka sare iyo aad GPA kor.
Habka ugu fiican ee la Chad ee Videos baran waa in lagu daweeyo Dabcan dib u eegis sida Dabcan kulliyad.
Print soo baxay dulmari ee qayb kasta ee aad baranayso
Dib u dulmar mid kasta oo ka hor daawashada cajaladaha ee qaybta in
Waxaad qaadataa qoraalo video kasta oo idil
Review qoraalada soo socda qayb kasta
Ma dhaqanka su'aalo for qayb kasta oo aad baratay
Dib su'aalaha iyo ka bartaan sababta aad heshay wax aan sax ahayn
Dib u eeg video ama qoraal aad mar haddii dhibcaha aad on qaybta a waa ay yar yihiin, ka dibna sameeyo su'aalo dhaqanka more
Waxaan ku talinaynaa lahaa sameynayo qaar ka mid ah su in aad ka iibsan kartaa iyada oo loo marayo Course Saver su'aalaha dhaqanka – waxa kale oo aad isticmaali kartaa agabyo dheeraad ah.
Waxaan aad ugu boorinayna lahaa isticmaalaya Chad ayaa Videos waayo, qaybaha Chemistry aad, sidii aan dareemi jirto il ma u eegista wanaagsan on suuqa ugu Chemistry. Chad ayaa Videos idin siin doonaa aasaaska weyn General Chemistry iyo Organic Chemistry, laakiin waxa aad u baahan tahay inaad samayso su'aalo badan dhaqanka si loo hubiyo in aad xoojiyaan aasaaska iyo heerka ku xiga qaadan karaan dhibcaha aad.
Waxaan eegi doona helitaanka qalabka dib u eegista dheeraadka ah ee intaa dheer in videos kuwan. Waxaan kula talin lahaa eegaya Kaplan ama Review Princeton The kooras dhamaystiran oo dib u eegis ah oo aad siin lahaa su'aalaha dhaqanka dheeraad ah iyo sidoo kale baaritaano dhaqanka dhererka buuxa badan.
Ii geyso CHADS VIDEOS!
CourseSaver hadda waxay bixisaa a 1 toddobaadkii maxkamad si xor ah u dhammaan xubnaha cusub ee ay goobta. Ka faa'iidayso of this fursad cajiib ah in ay la kulmaan oo dhan in ay leeyihiin in ay bixiyaan ka hor xitaa samaynta iibsi!
CourseSaver uu leeyahay qaar ka mid ah sifooyinka gaar ah in ka dhigo mid aad waxtar leh si ay ardayda pre-ilkaha badan ilo kale oo dib u eegis suuqa. Waxay leeyihiin qaybta a forums website-keeda in boostada su'aalo iyo inay helaan kaalmo ka users kale, ama xataa Chad ama Alan. Waxay sidoo kale leeyihiin feature chat, taasoo keeneysa in aad ula falgalaan dadka isticmaala kale a.
Waxay leeyihiin taageero macaamiisha weyn; mar kasta oo aan loo baahan yahay si ay u soo xiriir via email ay ku jawaabay si aad waqtiga.
Waxaad ma garaaci karaan qiimaha ee tayada wax dib u eegis ku CourseSaver. In my opinion tani ay tahay wax ugu wanaagsan ee qiimaha ugu fiican. All iibsadaan waa non-celin. Waxaad ka iibsan kartaa wax muddo ah 30 maalmood. ka dib markii ay 30 maalmood haddii aadan joojisid Times ka dibna aad si toos ah heshiiska doonaa in kale 30 maalmood. Waxaad joojin kartaa mar kasta oo aad hesho dhimis qayb barta in haddii aadan dhammayso 30 maalin Times. Tusaale ahaan, haddii aad loo isticmaalo videos for 45 maalmood ka dibna waxaa laguu soo oogi doono muddo labo 30 Macmiil-maalin, ka dibna ku dul kansali maalinta 45 waxaad heli lahaa dhimis qayb for haray 15 maalmaha Times labaad.
Waxaad ka iibsan karaan qaybaha gaarka ah ee imtixaan halkii isagoo si ay u iibsadaan wax kasta oo (i.e., Waxaad ka iibsan kartaa oo kaliya qaybta General Chemistry halkii iibsiga koorsada dib u eegis buuxda).
Tani waa muujinta kale oo weyn of CourseSaver. Ay u ogaadaan in aadan u baahan in dib loo eego wax walba ee qaybta a, sidaas darteed waxay ku siin fursad u kaliya iibsadaan waxa aad u baahan tahay halkii isagoo si ay u iibsadaan hal xirmo dhameystiran sida ilo kale oo dib u eegis suuqa.
Waxaan u diyaarinay dhimis gaar ah Course Saver for Akhristeyaasheena kaliya. Kasta user cusub si Course Saver doono si toos ah u hesho a 15% dhimis off ay iibsatay oo dhan.
Waxaad heli kartaa in aad wax ku CourseSaver meel kasta oo aad leedahay internet. Waxa kale oo ay app desktop oo u suurta galinaya in aad kala soo bixi Chad ee Videos helaan internet, ka dibna iyaga ku shuban on in ay iPad ah, Android, Mac ama qalab PC in ka dib u eegto xitaa aan internet.
Waan ogahay in aan lagu raving aan kala joogsi lahayn oo ku saabsan Chad ee Videos, laakiin waa run ahaantii way adag tahay in la helo wax xun in la yidhaahdo. Waan ogahay waxa ay u muuqataa mid aad u fiican in ay run, laakiin waxaan u soo baxay isku dayay iyo ku arkay iyo hadduu gartayba shakhsiyaad kale oo aan tiro lahayn in aad bay u faa'iideystey isticmaalaya alaabta this.
Waxaan bartay qaar ka mid ah videos iyo arkay aniga fahmo wax aan waligii la fahamsan yahay ka hor inta. Waxaan dareemay kalsooni badan ee kimisteriga iyo ugu danbeyn lahaa aasaas adag si aan gool u wanaagsan waxaa ku jira.
Nacasyo ha ahaanina iyo qabaa by kaliya daawashada cajaladaha aad yeelan doonaan isbedel mucjisada halkaas oo aad dhammaan score kadis ah in 20-sare ee ku saabsan qaybaha Chemistry ah. Waxaad u baahan tahay in ay ka shaqeeyaan waxa ay ugu, laakiin Chad ee Videos, Waxaan rumeysanahay, waa qalab sax ah oo ku siin kara waxa aad u baahan tahay si ay u qaataan dhibcaha si aad u heer sarreeya.
Waxaa jira khayraad kale oo waa weyn sidoo kale, laakiin tani waa mid ka mid ah waxaan gelin lahaa sare ee liiska iyo xaqiiqo ka fiirsan. Haddii aad qabto wax su'aalo ah ama faallo ka dibna si xor ah u hoos iyaga wadaagaan!
Chad ayaa Videos – CourseSaver DAT Review burburka
1. Top-Notch DAT Dib u Eegidda Koorsada
2. Mid ka mid ah Tools Teaching Best Available
3. Easy Si Baro Videos
4. Chemistry Guud & Organic Chemistry tahay Best The
5. Su'aalo dheeraad ah Available Si Iibso
6. Review NBDE Koorsooyinka
Course Saver (Chad ayaa Videos) dhimista IN – 15% OFF!
Wuxuu dhacayaa: 10/25
Chad's Videos DAT Coursesaver Review